Iyadda oo waqtiga sii dhamaanayo uuna jiro karkar siyaasadeed, dhaqan-gelinta Dastuur cusub waa mid maanka ka fog.
MUQDISHO, Soomaaliya – Doorashooyinka 2020 ee Soomaaliya waxaa hummaag gelin kara dib u dhaca iyo ka go'aansho la'aanta soo noqnoqota ee dalalka daneeyeya Soomaaliya, inkastoo UN-ka iyo saamileyda siyaasadeed qaar ay bixiyeen yabooh.
Iyadda oo Qaramadda Midoobay ay taageertay nidaamka Horeeyaa guuleysta, xaqiiqadu waxay tahay in rabitaanka uu noqon karo "rajo lagu fekerey".
Saaxiibadda Caalamka ayaa, sidda uu tibaaxay Swan, waxay taageersan yihiin nidaamka "qof iyo cod" taas oo ay rumeysan yihiin "in ay hoos u dhigeyso fowdada ayna keeneyso isku helayn badan".
"Shalay, ergayga UN-ka ee Soomaaliya James Swan iyo daneeyeyaasha caalamka waxay xaqiijiyeen taageeradooda doorashadda hal qof iyo hal cod. kulanka waxaa ka qeybgalay Wasiirka Amniga Gudaha, Maxamed Abuukar Islow," ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay barta Twitter-ka.
Inkasta oo yididiilo badan ka imaaneysa dhanka UN-ka, nidaamka "Horeeyaa guuleysta" wuxuu noqon karaa mid fashil ah, dalkana uma horseedi karto wax isbedel ah.
Falanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in UN-ka "ka gaabiyey" inuu dowladda ku cadaadiyo in ay buurto jawi nabad ah, tirokoobka dadweynaha, ayna dhameystirto Dastuurka si loo xaqiijiyo yoolka ajedanaha doorasho "qof iyo cod".
Cabdisalaam Salwe, xoghayihii joogtadda ee xafiiska Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa sheegay in qorsheynta nidaamka Horeeyaa guuleysta aysan xoog lahayn, isaga oo raaciyey "waa mid aan la gaari karin".
"Xitaa hadii muddo kororsi laysku raaco waa carab-laalaadin, tani waa mid aan la gaari karin oo aysan macquul ahayn," ayuu Twitter-ka ku yiri.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga Wadajir, ayaa meesha ka saarey suurta-galnimadda doorashooyin "qof iyo cod ah", isaga oo ku doodaya in balan-qaadka aan macquulka ahayn loogu gogol-xaaranayo muddo korarsi.
Qoraal uu Axadii soo dhigay Twitter-ka ayuu ku yiri: "Qof kasta oo soo dhaweynaya fekerka ah doorashooyin qof iyo cod ah ayaa dhici kara 2020 wuxuu dhabaha u xaarayaa muddo kororsi".
"Waa in aan wajahnaa xaqiiqooyinka, islamarkaana isugu imaanaa wada xaajood si aan ugu heshiino nidaam-horumarsan oo doorasho, waafaqsannna Dastuurka oo lawada ogol yahay, waqtiyeysan," ayuu hadalkiisa raaciyey.
DFS oo Jabuuti ku taageertay xubinimada Golaha Ammaanka
War Saxaafaded 19.08.2019. 15:58